Astaamaha, cilmiga dhulka iyo soo jiidashada dalxiis ee buuraha Toledo | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Geology
Haddii aad ka fekereyso inaad waxbadan ka barato cilmiga dhulka ee Spain, the Montes de Toledo iyagu waa xulasho aad u wanaagsan. Waa mid ka mid ah safafka ugu caansan ee buuraleyda Jasiiradda Iberia. Buuraha Toledo waxay asal ahaan asal ahaan ka soo jeedaan isbeddelka qadiimiga Iberian Hercinian massif. Muddo kordhintiisa oo dhan waxaan la kulmi doonnaa xarriiqyo buuro ah oo istaagaya aagagga Tagus iyo Guadiana oo gaari kara dherer dhan 200 km oo dherer ah iyo 100 km ballaaran.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax badan oo ku saabsan cilmiga dhulka ee buuraha Toledo iyo waxa aad arki karto haddii aad go'aansato inaad toddobaad wanaagsan ku qaadato meeshan.
1 Montes de Toledo oo ah goob dalxiis
2 Dabeecadda qaabkeeda ugu nadiifsan
3 Xadiiqadda dabiiciga ee Cabañeros
4 Qasriga Montalbán
5 Mashiinka 'Consuegra'
Montes de Toledo oo ah goob dalxiis
Buuraha Toledo waxaa sameeyay buuraha ku yaal gobollada Toledo iyo Ciudad Real. Kuwani waa safafka buuraha ee ka kooban buurahan: Sierra Altamira, Sierra Guadalupe (waxay leedahay meesha ugu sarreysa ee buuraha oo dhan, Villuerca, oo leh 1.603 mitir sare), Sierra Montañez, Sierra San Pedro iyo Sierra San Mamede.
Sidaad u aragto, waxyaabo badan ayaa laga arki karaa aaggan, markaa way mudan tahay inaad aragto. Dalxiiska miyiga ee meeshani waa mid firfircoon wuxuuna kobciyaa dhaqdhaqaaqa dhaqanka iyo caloosha. Haddii aad booqato buuraha Toledo, hubaal waxaad u baahan doontaa inaad ku celiso. Waxaan eegeynaa waxa aad arki karto haddii aad aadeyso usbuuc dhammaadka usbuuca si aad waqtiga uga faa'iideysato ugana faa'iideysato.
Kooxdan buuraha ah waxaan ka helnaa aqallo ku habboon iyo makhaayado si fiican loogu raaxeysto caloosha meesha. Tayada cunada buurta ayaa kaaga tagi doonta inaad rabto inaad isku daydo suxuun badan. Aaggan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee laga soo saaro macdanta, khamriga, saliidda iyo malabka. Intaas waxaa sii dheer, waxay caan ku tahay dhoobada, birta, alwaax, maqaar iyo xitaa farsamada dharka.
Akhlaaqdaasi waxay macnaheedu noqon doontaa inaadan ka tagi karin adigoon isku dayin xoogaa macaan leh ama aanad safarkaaga ka qaadan wax xusuus gacmeed lagu qurxiyo In kasta oo soojiidashadaan oo dhami ay kordhiso soojiidashada dalxiiska, waxa run ahaantii muhiim ah waa meesha dabiiciga ah ee loogu talagalay xaaladdeeda wanaagsan ee ilaalinta. Tani waa xaqiiqda dhabta ah ee soo jiidanaysa dalxiisayaasha ka soo jeeda jasiiradda oo dhan. Waxaa jira kala duwanaansho badan oo xayawaan ah oo ku nool kaymaha iyo waddooyinka ka jira buuraha Toledo.
Dabeecadda qaabkeeda ugu nadiifsan
Safafka buuraha waxaan ka arki karnaa noocyada xayawaanka sida xuurta madow iyo gorgorka madow. Noocyadan waxaa laga heli karaa oo keliya aaggan Spain, waayo waxa qofku dhihi karo waa caafimad. Intaas waxaa sii dheer, waa meel ballaaran oo dhammaan shuruudaha deegaanka loo buuxiyo si ay u noqdaan deegaan ku habboon qaar ka mid ah noocyada halista ugu jira baabi'inta sida lynx Iberian iyo gorgorka imbaraadooriga ah si ay u noolaadaan.
Dhammaan noocyada kala duwan ee fauna waxaa lagu dhammeeyaa noocyo badan oo caan ah sida shimbiraha biyaha, otter-ka, salamanders, ama damlieslies. Dhirta aagga buuraha oo dhan ayaa iyana taagan. Waxaan ka heli karnaa kaymaha caadiga ah ee Mediterranean-ka oo ka kooban inta badan geedaha holm, geedaha, geedaha korkooda, mirahaaga, rosemary iyo geedaha safsaafka ah.
Meelaha dabiiciga ah ee aan ka helno buuraha Toledo waa waajib. Haddii aadan istaagin deegaanka dabiiciga ah, waxaad tabi doontaa inta ugu fiican meeshan oo dhan, tan iyo dabeecadda ayaa ku siin doonta muuqaallada iyo khibradaha ugu fiican shaki la'aan. Gastronomy iyo dhaqanka, in kastoo ay aad u khaas yihiin, waxaan ka heli karnaa meelo badan oo leh astaamo isku mid ah. Waxaan qeexeynaa meelaha ugu mudan in la booqdo.
Xadiiqadda dabiiciga ee Cabañeros
Waxaa loo arkaa inay tahay kaynta ugufiican ee Yurub oo dhan. Ma aha oo kaliya jardiinada caadiga ah ee caadiga ah, waa wax gaar ah. Waa meesha kaliya ee Yurub oo dhan leh keynta Mediterranean-ka oo aan xasilloonayn. Thanks to xaaladdan wanaagsan ee ilaalinta waxaan waxaan ka heli karnaa xayawaan khatar ugu jira dabargoynta iyo xitaa burburka laga soo bilaabo Casrigan casriga ah.
Waxay ku taal waqooyi-galbeed Ciudad Real iyo koonfur-bari Toledo. Waxaa lagu dhawaaqay sida Beerta Qaranka 1995. Waa aag ilaalin u gaar ah Shimbiraha sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa Goob Muhiimad Bulsheed u Leedahay. Sidaad u aragto, qiimaha buuraha Toledo aad buu u sarreeyaa, markaa ma bixin karaan deegaan kale oo dabiici ah.
Nidaamyadeeda deegaanka waxay leeyihiin qiimo aad u saraysa deegaanka iyo dhamaan dhirta waxaan sidoo kale ka heli karnaa dhirta Atlantika. Dhirtaas waxaa lagu soo koobay Ribera Forest, Herbazales, Peatlands, Willows, cork oak, thyme iyo kuwo kale.
Qalcadani waxay ku taal koonfurta gobolka Toledo. Qasrigu asal ahaan waa Muslim waana kan ugu sharafta badan gobolka oo dhan. Muhiimaddiisu waxay ku jirtaa xaaladdeeda weyn ee ilaalinta iyo sababta oo ah Amarka Templars ayaa halkaas ku noolaa.
Qasrigan waxaa ku jira halyeeyo caan ah oo caan ah sida tan "Miiska Sulaymaan." Halyeeyadaas ayaa sheegaya in Boqor Sulaymaan uu qoray dhammaan aqoontii uu ka haystay koonka iyo qaaciddada uunka.
Ujeeddooyinka kale ee la booqanayo markaad tagayso buuraha Toledo ayaa ah kuwa wax lagu shiido oo ku yaal Cerro Calderico. Waxaa la dhisay intii u dhaxeysay qarniyadii 13aad iyo XNUMXaad waqtigoodana waxay ahaayeen isku dar XNUMX makiinado bur ah.
Dib-u-dhiska iyo dib-u-dhiska ka dib, maanta waxaa jira 12 milley oo keliya. Mills-ku waxay leeyihiin xoogaa gidaar dhismo ah iyo saqaf wareeg ah oo wareegaya. Waqtigaan la joogo, aad baa loogu soo booqdaa xaaladooda wanaagsan ee ilaalinta. Sidaad aragtay, hodantinimada dalxiiska ee buuraha Toledo waxay kujirtaa xaqiiqda ah in wax kasta oo ay muujiso ay leeyihiin ilaalin heer sare ah. Tani waa wax fiican haddii aad rabto inaad kordhiso tayada dalxiiska. Qofna ma doonayo inuu aado si uu u arko wax gebi ahaanba liidan taasna waxba kama soo kordhinayso.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku raaxeysan karto buuraha Toledo oo aad qorsheyn karto safar lama ilaawaan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Montes de Toledo